अवैध रुपमा बसिरहेकाहरुका सन्तानले अस्ट्रेलियाको नागरिक बन्न पाउँछ ?
अस्ट्रेलियामा गैरकानुनी रुपमा बसिरहेका बाबुआमाबाट कुनै सन्तान जन्मेमा उसले स्वत ः अस्ट्रेलियाको नागरिकता पाउँछ रे हो ?
२० अगस्ट १९८६ पछि अस्ट्रेलियामा जन्मेकाहरुको हकमा यदि उक्त व्यक्ति १० वर्ष नपुग्दासम्म अधिकांश समय अस्ट्रेलियामै बसेको छ भने उसले आफ्नो दशौं जन्मदिनमा अस्ट्रेलियाको नागरिकता पाउँछ ।
यस्तो अवस्थामा उसका बाबुआमा अस्ट्रेलियामा कानुनी वा गैर कानुनी कुन रुपमा बसेका थिए भन्ने कुराको मतलब गरिंदैन ।
तर, हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने बच्चा अस्ट्रेलियाको नागरिक हुँदैमा बाबुआमालाई पनि स्वतः नागरिकता वा पीआर मिल्ने भन्ने कुनै कानुनी प्रावधान भने छैन ।
काठमाडौं । पाँचौ संकरणको आरबीबी एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसीपको महिलातर्फ एपिएफले विजयी शुरुआत गरेको छ । एपिएफले आज भएको खेलमा जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रलाई ३–० सेटमा